Maxkamada rafcaanka ciidamada Puntland oo ku raacday xukun dil ah oo ka dhan ah afar xubnood oo Al-Shabaab ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaxkamada rafcaanka ciidamada Puntland oo ku raacday xukun dil ah oo ka dhan ah afar xubnood oo Al-Shabaab ah
May 9, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Xubnaha katirsan maleeshiyada Al-Shabaab. [Xigashada Sawirka: Horseed Media]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada rafcaanka ee ciidamada Puntland ayaa maanta oo Khamiis ku raacday xukun dil ah oo ka dhan ahaa afar xubnood oo lagu eedeeyay in ay katirsanyihiin maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha maxkamada.
Xubnahan ayaa horey waxaa dil toogasho ah ugu xukuntay maxkamada darajada kowaad ee ciidamada Puntland.
Diyaarado dagaal oo loo maleynayo in Mareykanku leeyahay oo duqeyn ka geystay gobolka Bari
13 maleeshiyo oo katirsan ISIS oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gudaha Puntland
Xisbiga talada haya Zimbabwe ee Zanu-PF oo ceyrshay hoggaamiyahoodii Robert Mugabe
Harare-(Puntland Mirror) Xisbiga talada haya Zimbabwe ee Zanu-PF ayaa si weyn isugu raacay in xilka hoggaaminta xisbiga laga qaado Madaxweyne Robert Mugabe, taasoo muujinaysa in uu dhammaaday xukunkiisii mudada badan ahaa. Zanu-PF ayaa madaxweyne ku [...]
Waddooyinka Muqdisho oo dib loo furay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa dib loo furay kadib dhowr maalmood oo ay xirnaayeen. Waddooyinka ugu mashquulka badan Muqdisho sida wadada Maka Al-Mukarama ayaa maanta waxaa adeegsanaya gaadiidka iyo dadka. Maalmihii ugu dambeeyay, dadka [...]